Top 8 bàn phím giả cơ chất lượng, bán chạy nhất hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
Top 8 bàn phím giả cơ chất lượng, bán chạy nhất hiện nay | Muasalebang
Đang Đọc: Top 8 bàn phím giả cơ chất lượng, bán chạy nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Uma kuqhathaniswa nekhibhodi ebonakalayo evamile ikhibhodi mechanical fake inikeza abasebenzisi umsebenzi wokufaka umyalo oshesha kakhulu futhi ozwela kakhulu. Ngakho-ke, le khibhodi ikhethwa futhi isetshenziswa abadlali abaningi. Ngakho ake sithole ikhibhodi engu-8 ehamba phambili nengcono kakhulu ye-pseudo-mechanical namuhla Ngiyacela.
1 Yini ikhibhodi esebenza ngomshini?
2 Ingabe ikhibhodi mbumbulu yemishini ilungile?
3 Imibandela yokukhetha ikhibhodi elungile, efanelekile ye-pseudo-mechanical keyboard
4 Ukubuyekezwa kwekhibhodi yekhwalithi ephezulu engu-8 okufanele ithengwe ngo-2022
4.1 3.1 Boston 803 . ikhibhodi engumshini
4.2 3.2 Boston G808 ikhibhodi mbumbulu mechanical eshibhile
4.3 3.3 Fuhlen G500S ikhibhodi engumshini
4.4 3.4 R8 1822. ikhibhodi yomshini wokudlala
4.5 3.5 R8 1910. Ikhibhodi
4.6 3.6 Ikhibhodi yomshini wokudlala yeMotospeed K68
4.7 3.7 Ikhibhodi yomshini G700 DC2222
4.8 3.8 Ikhibhodi ye-LED yakudala ye-K100
Yini ikhibhodi esebenza ngomshini?
Ikhibhodi yomshini mbumbulu iyisisetshenziswa se-peripheral esinomthelela ofanayo njengamanye amakhibhodi asebenzayo akhethekile. Nokho, lo mkhiqizo uzonikeza abasebenzisi umsebenzi wokufaka umyalo oshesha kakhulu futhi ozwela kakhulu.
Ukusebenzisa ikhibhodi yomshini kukhethwa abadlali abaningi namuhla. Ngokuyisisekelo, indlela yokunwebeka yale khibhodi ifana neyamakhibhodi avamile. Kodwa-ke, okhiye lapha baklanyelwe ngokukhethekile ukwandisa ukugxuma nokuzwela kokhiye. Umuzwa wesipiliyoni olethwa yile khibhodi ungafinyelela ku-60-70% uma uqhathaniswa namanye amakhibhodi asebenza ngempela.
Ingabe ikhibhodi mbumbulu yemishini ilungile?
Uma kuqhathaniswa namakhibhodi avamile ikhibhodi mechanical fake abe nokuzwela okuphezulu nokugxuma. Ngakho-ke, umsebenzisi akadingi ukwenza umthelela onamandla futhi usengakwazi ukwenza imisebenzi oyifunayo. Ukunemba nokuqina kwalekhibhodi nakho kuzoba kukhulu kunamakhibhodi avamile.
Ngenxa yalokho, ukusetshenziswa kwalolu hlobo lwekhibhodi-mbumbulu kuletha ukuphakama okwengeziwe kumsebenzisi, kusiza ukuvikela isihloko somsebenzisi futhi kusiza ukukhulisa ukunemba kwemisebenzi yakhe.
Hhayi lokho kuphela, uma kuqhathaniswa nezinkinobho zemishini, le khibhodi ibiza u-½ kuphela kodwa inikeza ukuzizwisa okulingana no-60-70% uma kuqhathaniswa nalawo makhibhodi.
Ngakho-ke, kuyabonakala ukuthi, usebenzisa ikhibhodi mechanical fake Inikeza abasebenzisi izinzuzo eziningi ezinhle. Ngakho-ke uma ungenaso isidingo sokutshala imali yakho kukhibhodi yomshini, ikhibhodi yomshini mbumbulu izoba yinketho enhle ongeke uyizibe.
>>>Reference: Top 6 Laptop Cooling Base Fan enomoya onamandla, intengo enhle, okwangempela
Imibandela yokukhetha ikhibhodi elungile, efanelekile ye-pseudo-mechanical keyboard
Inketho yokusebenzisa ikhibhodi mechanical fake okwamanje ethandwa abadlali abaningi nabasebenzi basehhovisi. Lokhu kungenxa yokuthi lekhibhodi izosekela isivinini sokuthayipha esisheshayo. Ngakho-ke ungakhetha kanjani imodeli yekhibhodi yomshini omuhle, ofanelekayo?
Ngokusekelwe kusayizi nesitayela sekhibhodi: Amakhibhodi mbumbulu anamamodeli amaningi ahlukene, kunezinhlobo ezinosayizi ogcwele ezinokhiye bokusebenza abangu-108 abagcwele, kodwa kunezinhlobo zokhiye abangu-74 kuphela, izinhlobo zokhiye abangu-65…. Ngokuya ngezithameli eziqondiwe kanye nezinketho ezahlukene zomuntu ngamunye, ungenza ukukhetha okufanele kakhulu kuwe.
Ngokusekelwe kokubalulekile nokuqina kwekhibhodi: Lesi yisici esibaluleke kakhulu okudingeka usinake lapho ukhetha ukuthenga lolu hlobo lwekhibhodi. Ngokuyisisekelo, kufanele ubeke phambili ukukhetha amakhibhodi ngezinto ezenziwe nge-ABS, i-POM, i-PVC, i-PBT noma i-PC. Ngaleso sikhathi, mayelana nempilo yekhibhodi, kufanele ubeke phambili imikhiqizo enobude bokuphila okungenani obuyizigidi eziyi-10.
Thembela ekuxhumekeni: Ukuze uxhume leyo khibhodi kukhompuyutha, ikhompuyutha ephathekayo noma i-PC, uzodinga izimbobo zokuxhuma ze-bluetooth noma uxhume nge-USB 2.0, 3.0,,….
Ngokusekelwe kumkhiqizo womkhiqizi: Kufanele ubeke kuqala ekukhetheni amamodeli ekhibhodi omsuka ocacile ukuze uqinisekise ikhwalithi nokuqina phakathi nokusetshenziswa.
Ngokusekelwe kwintengo: Intengo yekhibhodi yomshini mbumbulu ingasukela ku-200,000 VND ukuya ku-1,000,000 VND kuye ngohlobo. Intengo ngayinye ihlukile, ikhibhodi izoba nokucaciswa okuhlukile. Ngakho-ke, kufanele ucabange ngokucophelela ngaphambi kokukhetha ukuthenga.
>> Funda kabanzi: Amakhibhodi angu-09 Ahamba phambili e-Macbook namuhla (Iseluleko sokuthenga 2021)
Ukubuyekezwa kwekhibhodi yekhwalithi ephezulu engu-8 okufanele ithengwe ngo-2022
Isidingo ikhibhodi mechanical fake manje kuningi. Ngakho-ke, imakethe yale peripheral nayo iyasebenza kakhulu. Lokhu kuzokwenza kube nzima kubathengi ukubakhethela umkhiqizo ongcono kakhulu.
Ngakho-ke ukuze uxazulule lesi simo esingenhla, ungabeka phambili ukukhetha oku-1 kweziyi-8 ezingezansi ozozisebenzisa. Ngokulandelayo:
3.1 Boston 803 . ikhibhodi engumshini
I-Boston 803 ingenye yamamodeli ikhibhodi mechanical fake ethandwa kakhulu namuhla. Lo mkhiqizo unomklamo omuhle kakhulu wezibani ze-LED ezinemibala emihle kakhulu nethambile. Okhiye benziwa nge-PBT yezinga eliphezulu ukuze bahlale beqinile. Impilo engukhiye ingaba amakhiya okhiye afika ezigidini ezingu-10.
Akukhona lokho kuphela, le khibhodi iphinde ifakwe ikhono lokulwa nothuli kanye nokwenza okhiye bokuhlanza babe lula futhi basebenziseke kalula. Usayizi wekhibhodi mkhulu ngokhiye abangu-108 abahlukene. Ngenxa yalokho, abasebenzisi bangasebenzisa okhiye abangu-19 ngesikhathi esisodwa ukuze bathole isivinini sokucubungula idatha esisheshayo.
Ukunwebeka kwalekhibhodi nakho kuyabongwa, okusiza ukuthuthukisa isivinini sokusebenza kanye nokuletha ukunethezeka okwengeziwe kumsebenzisi. Ikhibhodi ifakwe imbobo yokuxhumana ye-USB 2.0 enobude bepulaki obufika ku-1.5m, ihlinzeka ngokusebenza kwesinqamuleli esisebenza ngempumelelo kakhulu.
Akugcini lapho, le khibhodi futhi inesikhathi sangempela sewaranti esingafika onyakeni ongu-1. Ngakho-ke, ungazizwa ukhululekile ukusebenzisa futhi uhlole imikhiqizo ukuze uzwe ukuqina kwayo.
Intengo yesithenjwa: 170,000 VND
3.2 Boston G808 ikhibhodi mbumbulu mechanical eshibhile
I-Bosston G808 futhi iyimodeli yekhibhodi yekhompyutha eyimishini ekhethwa abantu abaningi namuhla. Le khibhodi yakhelwe ngokukhethekile abadlali bamageyimu abangochwepheshe abazwela kakhulu nokunemba, okwenza imisebenzi yakho ishelele kakhulu.
Ikhibhodi iphila isikhathi eside ngokusebenza okuyizigidi ezingu-10 kanye nekhono lokusebenza kahle kakhulu, ingenzi nhlobo umsindo ngesikhathi isetshenziswa. Umkhiqizo uklanywe ngosayizi ogcwele wokhiye abangu-108, okukunikeza ulwazi oluphelele lapho udlala imidlalo.
Ngaphezu kwalokho, ikhibhodi mechanical eshibhile Lokhu futhi kulula kakhulu ukuhlanza nokunakekela. Okhiye baklanywe futhi bahlelwa ngobuhlakani obukhulu, okuvumela abasebenzisi ukuthi benze okhiye abangafika kwabangu-24 ngesikhathi esisodwa.
Ngaphandle kwalokho, le khibhodi ye-Boston G808 nayo ifakwe izibani ze-LED ezinemibala engu-7. Abasebenzisi bangalungisa ukukhanya nokucisha ukukhanya ngokhiye we-Scroll Block uma kudingeka. Le divayisi yangaphandle ingaxhumeka kalula kukhompuyutha yakho noma ikhompuyutha ephathekayo ngembobo ye-USB 2.0.
Intengo yesithenjwa: 140,000 VND
3.3 Fuhlen G500S ikhibhodi engumshini
I-Fuhlen G500S nayo ingelinye lamamodeli ekhibhodi mbumbulu okufanele uwathenge namuhla. Lo mkhiqizo uklanywe ngokwe-ergonomically, ulungele abadlali bamageyimu abangochwepheshe. Ikhibhodi ifakwe ukukhanya kwe-LED okungemuva ngezindlela eziningi ezihlukene zokulungisa.
Hhayi lokho kuphela, isampula Ikhibhodi ye-Fuhlen mechanical Iphinde yakhelwe ngembobo yokukhipha umoya ehlakaniphile, eyenza isebenze kahle emanzini. Idizayini yomkhiqizo nayo iphakeme kakhulu, ivumela abasebenzisi ukuthi basebenzise okhiye abangama-24 ngesikhathi esisodwa.
Umjikelezo wokuphila obalulekile uyaziswa, kufika izikhathi eziyizigidi ezingu-50. Akukhona lokho kuphela, ukhiye uklanywe ngedayimane elihlala isikhathi eside, elinikeza umuzwa oqinile futhi ozwela kakhulu ongahlukile kukhiye womshini.
>>> Bona okuningi: [Review] I-TOP 5 Iziqaphi Zekhompyutha Ezingcono Kakhulu ze-4K zango-2021
3.4 R8 1822. ikhibhodi yomshini wokudlala
I-R8 1822 imodeli yekhibhodi-mbumbulu abantu abaningi abafuna ukuyithenga namuhla. Lo mkhiqizo unemigqa ebukhali nethambile, hhayi ngaphansi kunezinye izinhlobo zamakhibhodi azimishini.
Isistimu eyisihluthulelo yalo mkhiqizo yakhelwe phezulu kakhulu kunaleyo yamakhibhodi avamile. Ngokolwazi oluvela kumkhiqizi, ibanga ukusuka kukhibhodi ukuya endaweni yenkinobho lifika ku-7mm ukuphakama. Siyabonga ngalokho, abasebenzisi bazothola umuzwa omuhle njengokuthayipha ngokhiye womshini.
Hhayi lokho kuphela, isampula ikhibhodi mechanical fake Lokhu kuletha lula kakhulu lapho uhlanza. Umkhiqizo ufakwe uhlelo lwe-LED olunemibala engu-7 edonsa amehlo, okwenza kube lula kubadlali bamageyimu ukulisebenzisa ebusuku.
Intengo yesithenjwa: 150,000 VND
3.5 R8 1910. Ikhibhodi
I-R8 1910 iyimodeli ikhibhodi mechanical eshibhile Inomklamo oyingqayizivele futhi ohlaba umxhwele. Idivayisi ifakwe uhlelo lwe-LED olunemibala engu-7, iletha induduzo kubadlali uma isetshenziswa ebusuku.
Umkhiqizo ufakwe imbobo yokuxhuma ye-USB 2.0, evumela abasebenzisi ukuthi baxhume kalula lo mkhiqizo kumadivayisi afana ne-PC noma i-laptop ukuze bayisebenzise kalula futhi kalula. Le khibhodi yomshini mbumbulu ifakwe inzwa yokubona enokulungiswa okungafika ku-2400dpi kanye nempilo engukhiye efika izikhathi eziyizigidi ezingu-10.
Intengo yesithenjwa: 220,000 VND
3.6 Ikhibhodi yomshini wokudlala yeMotospeed K68
IMotospeed K68 nayo iyimodeli ikhibhodi mechanical fake ethandwa kakhulu namuhla. Lo mkhiqizo waziswa kakhulu umhlaba wobuchwepheshe onekhwalithi ephezulu yezinto zepulasitiki ze-PBT futhi uphephile kubasebenzisi.
Le peripheral ifakwe izici eziningi ezivelele ezifana ne-Gaming Mode ekhubaza ukhiye Wewindi nokhiye abathile abangadingekile, njll. Ngaphandle kwalokho, lo mkhiqizo futhi uklanyelwe ukuvumela abasebenzisi Abasebenzisi ukuthi basebenzise okhiye abahlukene abangu-24 ngesikhathi esisodwa kalula.
>>>Reference: Top 8 best ezishibhile computer monitors namuhla
3.7 Ikhibhodi yomshini G700 DC2222
I-G700 DC2222 imodeli ikhibhodi mechanical eshibhile ungumnikazi womklamo omusha, oyingqayizivele futhi omuhle. Lo mkhiqizo ufaneleka kakhulu kubadlali bamageyimu.
Le modeli yekhibhodi inomklamo olula, ovumela abasebenzisi ukuthi basebenzise okhiye abaningi abahlukene ngesikhathi esisodwa. Akugcini lapho, umkhiqizo futhi ufakwe umsebenzi omkhulu, ovumela abadlali ukuthi bahlele kalula amakhono e-combo.
Le divayisi ewumngcele ifakwe imbobo engu-2.0 ukuze ixhume kumakhompyutha namakhompyutha aphathekayo, isiza umkhiqizo ukuthi usebenze ngokuzinzile nangempumelelo.
3.8 Ikhibhodi ye-LED yakudala ye-K100
I-Classic K100 LED inomklamo ohlangene, othambile onentambo yekhibhodi elungile, ekusiza ukuthi ungazizwa unzima kakhulu noma unzima ngesikhathi sokusebenzisa. Ikhibhodi yomshini mbumbulu Le divayisi ifakwe imbobo ye-USB, okwenza kube lula ukuxhuma kwamanye amadivaysi njenge-PC noma i-laptop.
Akugcini lapho, izinhlamvu ezikulekhibhodi zonke ziqoshwe nge-laser. Ngenxa yalokho, inkinobho yekhibhodi izohlala isikhathi eside, ibeke umkhawulo esimweni sokufiphala ngokuhamba kwesikhathi. Lo mkhiqizo futhi ufakwe izibani ze-LED, okuvumela abasebenzisi ukuthi bawusebenzise ngempumelelo ngisho nasezimeni ezimnyama.
Intengo yesithenjwa: 288,000 VND
Ngenhla ngu Amakhibhodi angu-8 athenjwe kakhulu namuhla. Ngethemba, ngolwazi olungenhla, uzozikhethela imodeli yekhibhodi efaneleke kakhulu, okwenza kube lula kuwe ukukhohlisa, ukusebenza nokudlala imidlalo.
>>>Funda kabanzi: [Kinh Nghiệm] Khetha ukuthenga isipikha esihle, sekhwalithi ye-Soundbar 2021
Xem Thêm Xì trây là gì? Một số thuật ngữ được dùng trong cộng đồng LGBT | Muasalebang
Dimsum là gì? Gợi ý một vài cách làm dimsum đơn giản tại nhà | Muasalebang
Top 5 loại Kem dưỡng Estee Lauder tốt nhất cho da hiện nay | Muasalebang